Ankafizo ny dia - Church of God World Switzerland
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Ankafizo ny dia
Nahazo dia tsara ve ianao? Matetika io no fanontaniana voalohany apetraka aminao rehefa miala amin'ny fiaramanidina ianao. Impiry ianao no mamaly hoe: “Tsia, nahatsiravina. Tara vao niainga ny fiaramanidina, nisavoritaka ny sidinay, tsy nisy sakafo ary marary andoha aho izao! "
Na aiza na aiza misy ny fiainantsika dia ny andro fitsangatsanganana. Toa mihazakazaka isika mankany amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa, maimaika mankany amin'ny fanendrena hihaona amin'ny olona ary hiampita zavatra tsy ao anaty lisitray. Andao hijerentsika indray mandeha haka sary an-tsaina ny andro ary hiteny hoe: “Fotoana eo amin'ny fiainako izany. Misaotra anao Tompoko mandritra izao fotoana izao sy mandritra izao fiainana izao ”?
“Tokony hiaina bebe kokoa amin’izao fotoana izao isika”, hoy i Jan Johnson ao amin’ny bokiny hoe “Mankafy ny Fanatrehan’Andriamanitra” “satria manampy antsika hankasitraka ireo dingana sy vokatry ny fiainana izany”.
Mihoatra noho ny manitikitika zavatra ao anaty lisitray fotsiny ny fiainana. Indraindray isika dia sahirana be amin'ny famokarana ary tsy mahatsiaro afa-po raha tsy mahavita araka izay tratra. Na dia tsara aza ny mankafy ny zavatra vitanao, dia mamy kokoa ny hoe "mankafy izao fotoana izao fa tsy mijanona amin'ny lasa na mieritreritra ny ho avy" (ibid.) Tsy ny zavatra tsara ihany no miseho. Tsara kokoa eo amin'ny fiainana rehefa mankafy ny fotoana rehetra, fa ny ratsy koa dia lasa mora zakaina rehefa raisina ho ampahany amin'ny dingana rehetra. Ny fitsapana sy ny olana dia tsy maharitra fa vato manjavozavo eo amin'ny lalana. Fantatro fa mora ny miteny. Na izany aza anefa dia efa nandalo fotoan-tsarotra be dia be ianao ary tsy ho ela dia ho ao aoriany ny anao ankehitriny. Manampy anao koa izany mba hampahatsiahy ny tenanao fa tsy noho izany tanjona izany fotsiny no nahatongavantsika teto. Mankany amin'ny toerana hafa tsara kokoa isika. amin’ny Filipiana 3,13-14:
«Ry rahalahy, tsy mihevitra ny tenako ho naka izany aho; Izao zavatra iray izao: